Khulisa ukuphepha kwe-WordPress > UVielhuber David
Khulisa ukuphepha kwe-WordPress09
Ukuphepha kohlelo lokuphathwa kokuqukethwe okwaziwa kakhulu njengamanje i-WordPress kungakhuliswa kakhulu ngokuguqula izikulufo ezimbili ezincane. Kuthatha kuphela imizuzu emi-5 nolayini ababili bekhodi. Yize inkinga ingaxazululwa ngama-plugins ahlukahlukene, ngizikhawulela ngamabomu kuzixazululo ezingenawo ama-plugin.
Ngakolunye uhlangothi, umaki we-meta wembula
inguqulo yakamuva futhi ifundeka kalula kusetshenziswa iscraper. Uma kuvele umgodi wokuvikeleka obucayi wenguqulo ekhethekile ye-WordPress, kulula ukulandelela izinkulungwane zamawebhusayithi ngale nguqulo ngqo. Ngakho-ke kufanele ususe imininingwane ngale hook elandelayo:
Inkinga yesibili ukukhuluma kwedeshibhodi. Uma ufuna ukungena ngemvume, imininingwane inikezwa ngokungaqondile mayelana nokuthi igama lomsebenzisi likhona yini. Imilayezo yamaphutha ingasetshenziswa kalula nezinhlelo ezifanele ukukhulisa amathuba okuba kuhlaselwe ngokuhlaselwa ngamandla. Ngakho-ke kufanele futhi uthathe isinyathelo lapha bese ufaka ingwegwe elandelayo:
Izinyathelo ezishiwo zandisa ukuphepha kwebhulogi yakho futhi kulula ukuzisebenzisa. I-WordPress ithathwa njengephephile ekucushweni kwayo okujwayelekile, kepha ukusetshenziswa kwayo kabanzi nokuthandwa kwayo kusho ukuthi ihlala ihloselwe abangabahlaseli.